Akụkọ banyere achụmnta ego. Geopois.com - Geofumadas
Machị, 2021 Cartografia, Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS
Na mbipụta 6 nke a Magazin Twingeo Anyị na-emepe ngalaba a raara nye azụmaahịa, oge a bụ oge Javier Gabás Jiménez, onye Geofumadas kpọtụrụla n'oge ndị ọzọ maka ọrụ na ohere enyere ndị obodo GEO.
N'ihi nkwado na mbanye nke obodo GEO, anyị jisiri ike depụta atụmatụ azụmahịa anyị wee rute usoro ikpeazụ nke asọmpi ActúaUPM, n'agbanyeghị na anyị enwetaghị ihe nrite ego, anyị gara n'ihu iji ego anyị.
Edere isiokwu ahụ "Akụkọ banyere achụmnta ego: Geopois.com" nke Javier n'onwe ya dere, ebe ahụ ka ọ na-ekwu maka akụkụ nke mmalite nke ụlọ ọrụ ya ruo mgbe ọ gbanyere nkwado na Geopois.com. Anyị na-echeta na Geopois bụ Thematic Social Network na Geographic Information Technologies (TIG), usoro ihe ọmụma banyere ala (GIS), mmemme na Maapụ Weebụ ”.
Anyị chọrọ ịhapụ ihe ụlọ ọrụ ọzụzụ ndị ọzọ na-eme, na-atụgharị geopois.com ka ọ bụrụ netwọkụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ngalaba GEO, ọkachasị na mmemme na ụlọ ọba akwụkwọ, nwere isiokwu akọwapụtara nke ọma yana mmekọrịta chiri anya n'etiti obodo anyị.
Kemgbe 2018, Gabás na-ekwu maka otu o si malite ịzụlite echiche nke "teknụzụ geospatial teknụzụ" mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na injinia na geomatics na topography na Mahadum Polytechnic nke Madrid ma rụọ ọrụ na Startups na Multinationals.
Ogo ahịa ahịa nyocha ụwa na-atụ anya ịbawanye site na $ 52,6 ijeri na 2020 ruo $ 96,3 na 2025, yabụ na achọrọ ndị ọkachamara na-ahụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ
Na nnukwu ọzụzụ ọkachamara, Javier nwere akara mmụta 5 nke nyere ya ogo na, karịa ihe niile, ihe ọmụma na teknụzụ njikwa data dịka mmemme, SQL, No SQL, Geographic Information Systems (GIS) nke nyeere ya aka inwe ntọala iji mepụta Geopois.
Ihe anyị na-enye ndị ọrụ anyị bụ ikike isonye site na imepụta nkuzi site na usoro ịhazi igwe, ka OpenStreetMap si eme, dịka ọmụmaatụ. Anyị na-echebara ọdịnaya anya, anyị hụrụ n'anya na anyị ga-elekọta ma nye ndị ọrụ anyị nnukwu visibiliti na mgbakwunye na ịmegharị ndị edemede anyị na ịnye ha websaịtị ọkachamara ebe ha nwere ike igosipụta onwe ha.
Nkewapụrụ iche site na afọ, mgbalị ndị otu niile nke Geopois gosipụtara ka etolite ụlọ ọrụ a nke na-enye ndị nyocha niile na ndị nwere mmasị na data gbasara ohere ohere. Weebụ na-enye ndị ọzọ mmụta yana netwọkụ nke ndị na-emekọ ihe ọnụ nwere ike ịkpọtụrụ maka ọrụ ụfọdụ metụtara ụwa GEO.
Anyị mechiri afọ ahụ site na mmụba na nleba anya karịa ọnụ ọgụgụ nleta, ihe karịrị nkuzi nkuzi pụrụ iche 50 na teknụzụ ndị na-ahụ maka ọdịdị ala, obodo LinkedIn na-eme nke ọma na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-eso ụzọ 3000 na ihe karịrị 300 ndị mmepe mmepe aha ha sitere na mba 15, gụnyere Spain, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Mexico, Peru, Poland ma ọ bụ Venezuela
Na nkenke, Geopois bụ echiche na-adọrọ mmasị, nke na-agwakọta ọnọdụ ndị nwere ike ịkọwapụta nke a dabere na ntinye ọdịnaya, mmekorita na ohere azụmaahịa. N'oge dị mma maka gburugburu ụwa nke ụbọchị ọ bụla edochaghị anya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile anyị na-eme ná ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ a, ị ga-ahụ isiokwu ahụ site na ịme pịa ebe a
Ozi ndị ọzọ?
Naanị ihe ị ga-eme bụ ịkpọku gị ka ị gụọ mbipụta ọhụrụ a, nke anyị kwadebere gị na oke mmetụta na mmetụta ịhụnanya, anyị na-ekwusi ike na Twingeo dị n'aka gị ịnata isiokwu metụtara Geoengineering maka mbipụta gị ọzọ, kpọtụrụ anyị site na ozi ịntanetị editor@geofumadas.com y nchịkọta akụkọ@geoingenieria.com. Kedu ihe ị na-eche ibudata Twingeo? Soro anyị na LinkedIn maka mmelite ndị ọzọ.
Previous Post«Previous UNFOLDED: usoro ohuru maka njikwa data gbasara ohere
Next Post IMARA.EARTH mbido nke na-atụle mmetụta gburugburu ebe obibiNext »